XOG: Howe oo lagu wado in uu badalo Wenger – Gool FM
XOG: Howe oo lagu wado in uu badalo Wenger
Kaafi September 23, 2016
(London) 23 sebt 2016. Arsenal waxa ay Eddie Hawe la rabtaa in uu noqdo tababaraheeda marka uu Arsene Wenger kooxda ka taga gaba gabada lolahan, sidaas waxaa qortay Daily Star.
Warka ayaa sheegaya in Wenger oo u dabaal dagay sanad guuradiisii 20-naad tan iyo markii loo magacaabay xilka tababarenimo ee Arsenal khamiistii in uu ka tagayo Gunners marka uu qandaraaskiisa idlaado xagaaga dambe.
Waxaa la fahansan yahay in milkiileyaasha kooxda ay diiradda saarteen tababaraha Bournemouth Howe.
Howe oo ay da’diisu tahay 38 sano ayaa ka mida tababareyaasha da’da yar kuwooda ugu wanaagsan kaddib markii uu ka shaqeeyey in kooxdaas uu u soo dalacsiiyo heerka kowaad halka uu ka bad baadiyey dib in ay ugu laabato kal hore.
Andres Iniesta oo irdaha ka xirtay Man City: “Waxaan doonayaa inaan ciyaaraha kaga fariisto Barcelona”
Lionel Messi oo u mahad celiyey Borussia Monchenglabach